Yintoni izihlanganisi zobushushu kwaye zisebenza njani | Ukuhlaziywa okuluhlaza
Abantu abaninzi banobushushu bombane kumakhaya abo kwaye qaphela ekupheleni kwenyanga ukuba ityala labo lombane lenyuka njani. Ukusetyenziswa kombane okunxulumene nolu hlobo lomsebenzi kukhula ngokukhawuleza kumaxesha abandayo. Umbane njengendlela yokufudumeza intofontofo kwaye isebenza kakuhle, kodwa ithathwa njengeyona yexabiso eliphezulu kwintengiso. Nangona kunjalo, ukunqanda ezi ngxaki zikhona izixhobo zokuqokelela ubushushu.
Yintoni le nto malunga nezihlanganisi zobushushu? Ukuba ufuna ukwazi indlela yokonga kangangoko xa kufudunyezwa, apha sichaza yonke into enxulumene nezihlanganisi. Kufuneka uqhubeke ufunda 🙂
1 Yintoni izihlanganisi zobushushu?
2 Iinkqubo zokufudumeza ngombane
3 Iindidi zezihlanganisi zobushushu
4 Iimpawu eziphambili
Yintoni izihlanganisi zobushushu?
Zizizixhobo ezinoxanduva lokuguqula amandla ombane abe ngumbane oshushu ngexabiso eliphantsi kakhulu. Oko kukuthi, ngombane singawafudumeza amagumbi ethu kodwa ngexabiso eliphantsi kunawokufudumeza okuqhelekileyo. Ziyilelwe ukusebenzisa amandla ombane ngexesha lamaxesha ancitshisiweyo Zonke iirhafu ziza neshedyuli apho umbane ungabizi kakhulu. Ezi zixhobo zinoxanduva lokuguqula amandla ombane ngexabiso eliphantsi lemini kwaye uziqokelele ngohlobo lobushushu. Obu bushushu buya kufumaneka xa sibufuna.
Ezi zixhobo zizisa izibonelelo ezinkulu zokusetyenziswa, kuba singabusebenzisa ubushushu babo nanini na sifuna kwaye siya kunciphisa iindleko. Ukongeza koku, izixhobo zokufudumeza ezinye izibonelelo ezinje ngezi:
Akukho balahleko bushushu ngexesha lokusetyenziswa. Oku kwenzeka ngenxa yokuba zikulungele kuphela ukubiza amandla afanelekileyo afunekayo. Njengoko amandla engagcinwanga ngaphezulu, akukho lahleko.
Yonga amandla ngakumbi kwaye inike intuthuzelo ephezulu. Ukuba namandla xa kufuneka kube lula kakhulu. Ineshedyuli yomthwalo kwinkqubo yokunciphisa iiyure zokuqinisekisa ukonga phakathi kwama-50 nama-60%.
Akukho luhlengahlengiso lwasemva kofakelo olufunwayo.
Inokhetho lokudityaniswa kwinkqubo yolawulo olukude.
Uyilo luhlangene, ngoko ke akukho nzima ukudibanisa nokuhonjiswa kwendlu. Ukongeza, ukuphathwa kunye nokugcinwa kwayo kulula.
Iinkqubo zokufudumeza ngombane
Baninzi abantu abafake ukufudumeza ekhaya. Bonke abo bantu bakhethe ukufudumeza, banokonwabela izixhobo ezinje:
Ioyile okanye iiradiator zombane. Yenye yezona zinto zindala zokuqokelela ezikhoyo. Basebenza ngokufudumeza ioyile eshushu. Xa oku kusenzeka, amaqondo obushushu ayenyuka njengoko ubushushu obubambeke kwioyile.
Umgangatho oshushu. Ubushushu bomgangatho ongaphantsi kufakelo apho kubekwa khona uthungelwano lwemibhobho okanye iintambo ezihambisa amanzi ashushu phantsi komgangatho wendlu. Oku kunceda umhlaba ukuba ukhuphe ubushushu kwaye wandise iqondo lobushushu kweyona mihla ibanda ebusika. Ibe yenye yezona nkqubo zangoku nezifanelekileyo, nangona iindleko zayo zokuqala ziphezulu kwaye zifuna imisebenzi.
Impompo yobushushu Uncedo lolu hlobo lwe-accumulator kukuba aludli amandla amaninzi. Icala elisezantsi kukuba lifudumeza kuphela igumbi apho likho. Ubushushu buhlala busasazeka ngokukhawuleza, ngoko ke abuxabisekanga.
Amacwecwe amnandi. Ngamaza ashushu anyusa ubushushu begumbi apho lifakwe ngendlela efanayo.
Abaqokeleli bobushushu. Njengoko sele kukhankanyiwe, zizichasi zombane ezigcina ubushushu xa inqanaba lombane liphantsi kwaye ziligcine.
Abahambisi. Zizixhobo ezinoxanduva lokungenisa umoya obandayo kunye nokugxotha umoya oshushu ngenxa yezinye izinto ezichasayo kunye neethemostathi abanazo.
Iindidi zezihlanganisi zobushushu
Zimbini iindidi zezihlanganisi zobushushu ezinokuthi zifakwe ngabathengi emakhayeni abo:
Engatshintshiyo. Le modeli iyakwazi ukukhupha amandla obushushu ngokwendalo. Kuyacetyiswa ukuba indawo ezihlala ngokusisigxina kuba ubushushu be-intofontofo buhlala buhleli.
Amandla. Bane fan elinceda ukuhanjiswa kwamandla. Ukubekwa bodwa kusebenza ngakumbi kunakwindawo emileyo. Ukulawula ukukhutshwa kwamandla kubavumela ukuba baphathe ngcono amaqondo obushushu eendawo ezahlukeneyo zendlu.
Ukwandisa inkcitho kwezoqoqosho, into edla ngokwenziwa kukudibanisa zombini ezi ndidi zezihlanganisi endlwini. Ezingaguqukiyo zibekwe kwiindawo ezinkulu kwaye ezinamandla zisetyenziswa kwezi ziphakathi.
Xa ukhetha ukuba yeyiphi i-accumulator efanelekileyo ngezizathu zezoqoqosho, kunokuthiwa inamandla. Kungenxa yokuba ivumela ulawulo olungcono lweendleko kunye nokusasazwa kobushushu kumagumbi ngokuxhomekeke kwimfuno.
Inkqubo yokufudumeza yokuqokelela inendawo yokugcina encinci. Uyakwazi qokelela amandla kwaye ugcine ufumaneka kuba xa kufuneka njalo. Inokuhlengahlengiswa ukuze isebenze ngeyure apho inqanaba lombane liphantsi.
Kubalulekile ukuba ukhankanye ukuba ezi zinto zifunekayo kufuneka zikhatshwe bubushushu ekhaya. Ukuba asinazo iifestile ezisivumela ukuba silawule ubushushu okanye ukubanda esikungenisa nangaphandle kwamagumbi okanye iityathingi ezaneleyo, akunakusinceda.
Ukufakwa kwezi zixhobo kulula kakhulu kwaye akudingi msebenzi. Ukugcinwa kwayo kuphantsi kakhulu. Ifuna kuphela ukucocwa konyaka kunye notshintsho lweebhetri zeekronothermostats.
Njengazo zonke izibonelelo kulo naluphi na uhlobo lwezixhobo zombane esizisebenzisayo, kule meko siza kuchaza iziphene enazo. Umthwalo wobushushu oqokelelweyo kufuneka wenziwe kwangaphambi kwexesha. Oku kunyanzela abathengi ukuba benze iinkqubo zabo. Ukuba asazi ukuba kuya kubanda okanye hayi ngexesha elithile, asinakho ukuwusebenzisa ukuba siwufuna kwangoko. Kungenzeka ukuba sinotyelelo olungalindelekanga kwaye asikwazi ukubonelela ngokufudumeza ngenxa yokungabinakho ngaphambili.
Ngaphambi kokufumana isihlanganisi kuya kufuneka uthathele ingqalelo ezinye izinto ezinje:
Ixabiso eliphezulu kwisixhobo ngasinye. Olu lutyalo-mali lokuqala, nangona lihlawula ngokuhamba kwexesha.
Ukuba umthengi unerhafu enocalucalulo lweyure, ukuvuselelwa kwamandla kufuneka kwenziwe ebusuku.
Kukho ulawulo oluncinci malunga nokukhutshwa kobushushu.
Ngohlalutyo lwale miba, ndiyathemba ukuba unokukhetha inkqubo yakho yokufudumeza kakuhle 🙂
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Uqoqosho lwaseKhaya » Yintoni izihlanganisi zobushushu kwaye zisebenza njani?
Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nokuphola komphunga